Ngenxa Yokuqeda Ukusekelwa kweWindows 7, Abathuthukisi beVivaldi bakumema ukuthi uthuthele kwiLinux | Kusuka kuLinux
Sekusele inyanga ukuthi siphele ukwesekwa kweWindows 7, ngoba iMicrosoft izoyeka ukunikeza ama-patches nezibuyekezo zokuphepha kusukela ngoJanuwari 14, 2020. Futhi noma kusasele izinsuku ezimbalwa futhi IMicrosoft ibe nomkhankaso oqinile lapho emema abasebenzisi beWindows 7 ukuthuthukela ku-Windows 10 mahhala, namanje ikota labasebenzisi beWindows bayaqhubeka kule nguqulo.
Ngalokhu, isimemo sokushintsha uhlelo lusebenzise abasebenzisi asinakiwe IWindows 7 hhayi iMicrosoft kuphela kepha neLinux. Futhi siyakhumbula ukuthi okunye ukusatshalaliswa kweLinux kusizakale ukuphela kokuxhaswa kweWindows XP ukumema abasebenzisi ukuthi bathuthele eLinux futhi basebenzise ukusatshalaliswa kwabo.
Kulesi senzakalo icala alizange linikezwe ngokuzenzakalela, kepha ubengeyena unjiniyela wanoma ikuphi ukusatshalaliswa noma enye i-distro ethandwayo ekwenzeni isimemo sokufuduka kusuka ku-Windows kuye ku-Linux, kunalokho, labo abasizakala ngalokhu kwakungabathuthukisi beVivaldi.
IVivaldi, iyisiphequluli sewebhu samahhala esakhiwe yiVivaldi Technologies, inkampani esungulwe ngumsunguli kanye nowayengumphathi omkhulu we-Opera, uJon Stephenson von Tetzchner.
Njengo-Opera, iVivaldi inezinto ezifana ne-Speed ​​Dial, Rewind / Fast Forward, nezinye izici zesiphequluli se-Opera.
Esikhangisweni ngabathuthukisi beVivaldi batusa ukuthi "abasebenzisi bangaphambilini beWindows 7" ye-2020 Ungayi ku-Windows 10, kodwa ukusatshalaliswa kwe-Linux.
Ngokwesimemezelo, Onjiniyela Bathi ngokusatshalaliswa kwe-Linux kungenye yezinketho ezihlakaniphe kakhulu kuze kube manje, ngoba cishe noma iyiphi ikhompyutha ye-Linux izosebenza ngokushesha futhi ivikeleke kakhulu kunekhompyutha efanayo ye-Windows. I-Linux futhi iyi-OS yokuzikhethela yezinhlelo ezifakiwe, amadivayisi asekhaya ahlakaniphile, ne-IoT.
Ukufaka okunye esikhundleni seWindows 7 ngeLinux kungenye yezinto ezihlakaniphe kakhulu… Cishe wonke amakhompyutha azosebenza ngokushesha nangokuphepha nge-Linux kune-Windows… Abasebenzisi banconywa ukuthi bafake ukusatshalaliswa kwe-Ubuntu noma kweSolus.
Ngalo mqondo, uVivaldi uyachaza:
“Kungenzeka ukuthi iWindows 7 yakho isebenza emshinini omdala ongaba nezinkinga ngohlelo olusebenzisela izinsizakusebenza olufana neWindows 10.
Ukuze usebenzise iWindows 10, udinga iprosesa eyi-1 GHz, i-1 GB ye-32-bit noma i-2 GB ye-RAM engama-64-bit, i-16 GB ye-32-bit OS noma i-20 GB ye-OS engama-64-bit, nesikrini esinokuxazululwa 800 x 600. Futhi lokho ubuncane.
Emishinini eminingi, impendulo ngeke ibe yiWindows 10. Okudingayo uhlelo olusindayo, olusebenzayo, futhi nolumelana negciwane.
Okokugcina mayelana nokuthunyelwe okufanayo ngabathuthukisi beVivaldi, babelana umhlahlandlela olula we Ungayifaka kanjani indawo yeWindows 7 neLinux? Lapho babelana khona ngezixhumanisi zokulanda Ubuntu, uSolus futhi bancoma nokubheka iDistrowatch.
Nalu uhlu lokuhlola olusheshayo lwalabo abafuna ukufaka iWindows 7 ngeLinux.
Khetha ukusatshalaliswa kwe-Linux
Enye ye Ukusatshalaliswa kweLinux okudume kakhulu Ubuntu futhi kuhle kunoma ngubani ofuna ukufaka esikhundleni seWindows 7 ngeLinux. Kulula ukuyisebenzisa futhi iyahambisana nezinhlelo zokusebenza eziningi.
Uma ufuna ukusatshalaliswa kweLinux enesixhumi esibonakalayo sanamuhla, bheka iSolus . Amathuluzi amaningi owadingayo afakiwe ekufakweni.
Bheka i- amazinga okuthandwa ukusatshalaliswa lapha.
Uma ungeke ukwazi ukunquma ekuqaleni, ukusatshalaliswa okuningi kweLinux kunenketho ethi "Bukhoma" ekuvumela ukuthi uqalise ku-USB stick bese ubona ukuthi isebenza kahle yini emshinini wakho. Uma usenelisekile (futhi wenze isipele), ungafaka ukusatshalaliswa kwakho.
Ukufaka iLinux kuyashesha. Kuthatha imizuzu embalwa ukusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Ngokwabiwa okuningi, ungakhansela ukuqoqwa kwedatha lapho ufakwa.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemininingwane yokushicilelwa kwabathuthukisi beVivaldi, ungabheka imininingwane ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ngenxa yokuphela kokusekelwa kweWindows 7, abathuthukisi beVivaldi bakumema ukuthi uthuthele eLinux
IVivaldi isiphequluli esikhohlisayo ... umqondo bekungaba ukunamathela ku-Presto:
Leyo yinkinga ye-google engine monopoly, yingakho ngibheja kuFirefox njengenye indlela,
Uhlobo olusha lwe-QEMU 4.2 selulungile, yazi izindaba zalo ezivelele kakhulu